XO-55 Chinyorwa Gara Kumira Wiricheya | Karman Healthcare
Iyo XO-55 Horizon Manual Yakamira Wiricheya ndiyo chair yakafanira yevashandisi vari kutsvaga imwe nzira inodhura kune simba rakamira pawiricheya.
Zvakafanana neyedu yakatarwa XO-101 uye XO-202, iyo XO-55 inosiyana nekuti inobvumidza wega kumira nemaoko, pamwe nemaoko kusimudzira chigaro uri panzvimbo yakagara.
Ichishandisa iyo yakareruka uye yakasimba kwazvo aluminium mupasi, pamwe nekubatanidza ergonomics mune dhizaini uye furemu dhizaini, yakamira wiricheya inorema mukati ingori 57 mapaundi. Kune varwere vanoda kumiririra kumanikidzwa, rusununguko, kutenderera kweropa, kugadzirisa kugaya, kusimbisa mapfupa, kana kutadza kumira vega, XO-55 Horizon yakamira wiricheya inobvumidza vashandisi kuzvimiririra vega wiricheya mumabasa ezuva nezuva, uye nemaoko kumira pazvinodiwa.
Wiricheya yakamira yakashongedzerwa zvakaenzana nezvose zvinodiwa kuti zvishandiswe nekukasira senge chest harness, pelvic seat belt, uye ibvi rutsigiro. Scissor dhiraivhi vhiri inokiya, flip up tsoka, kukurumidza kuburitsa pamberi caster maforogo nemavhiri zvese izvi ndezvokubatsira mutengi kuitira nyore kutakura pazvinenge zvichidikanwa. Yedu dhizaini chinhu inoenda kupfuura kupfuura iyo armrest furemu yakakombama kubvumira kuti zvive nyore kuchinjisa, pamwe nekugadzira kukwidziridzwa kwepanyama mumusika wekumira wiricheya.
Tichitora kurudziro kubva pasimba redu rakamira pawiricheya nhevedzano, iyo XO-55 Horizon yakagadzirirwa yedu yakakurumbira kumashure strut bar iyo inobatsira kudzikamisa cheya takamira, pamwe nekuparadzira simba kana bhuku richikurudzira. Sporty 16 Yakataura pneumatic kukurumidza kuburitsa mavhiri ane Kenda matai, uye neakagadziriswa camber uye chigunwe kubvumira yakamira wheelchair kuti ive yakakodzera kushandiswa kwemazuva ese.
Sarudza chisarudzo ... 18 " 19 " 20 " 21 " 22 "
Mavhiri ekumashure *
Sarudza chisarudzo ... Yakajairwa (Pneumatic Tire 16 Yakataura neRed Kenda Tire) 24 ″ x1 ″ Spinergy LX 12 Yakataura Pneumatic Kenda Tire uye Tube (+ $ 895.00)	24 ″ x1 ″ Spinergy SPOX 18 Yakataura Pneumatic Kenda Tire uye Tube (+ $ 695.00)	24 ″ x1 ″ Spinergy WIRE 30 Yakataura Pneumatic Kenda Tire uye Tube (+ $ 295.00)
Kenda Tire Ruvara (Chete nema Spinergy mavhiri)
hapana Yero Tsvuku Bhuruu
Spinergy Yakataura Ruvara (Chete nema Spinergy mavhiri)
hapana Yero Tsvuku Bhuruu Nhema
hapana 16 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 176.00)	18 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 176.00)	16 ″ x16 ″ Chigaro cheFoam Cushion 2 ”(+ $ 72.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro cheFoam Cushion 2 ”(+ $ 72.00)	16 ″ x16 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 98.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 98.00)
hapana 16 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Cushion (+ $ 116.00)	18 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Cushion (+ $ 116.00)	16 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 98.00)	18 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 98.00)
XO-55 Horizon huwandu
Categories: Wiricheya yemagetsi, Simba Mawiricheya, Kumira Wiricheya, Ultra Lightweight Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Muenzaniso: XO-55 Horizon Yakamira hwiricheya Chinyorwa Propel
Chete 55 lb. huremu hwese nemavhiri (41 lb furemu uremu)
Kurumidza Kuburitsa Caster Forks, uye Kumashure mavhiri
Yakachena Chena Furu Ruvara
Transparent Yakareruka Inopindirana Padivi Panel
Yakakwirira Simba Struts yeManongedzo Akamira
Yekuseri Strut Bar yeKugadzikana uye Kuwedzera Nimbleness
Nyore Kushandisa Yakamira Bata Inotendera YeManyore Mira Mune zvishoma se10 masekondi
Yakareruka Dhizaini Dhizaini
Inofema Nylon Chifuramabwe / Upholstery Chigaro uye Kudzoka
24, X 1, Yakakwirira Mbiri Pneumatic Tires
6 ″ x1 1/4 ″ Poly Foam Pamberi Flat Mahara Casters
Chest Strap, Pelvic Seatbelt, uye Knee Strap ndizvo zvakajairwa
Scissor Style Wheel Kuvhara
Kureba Kureba 11 padiki.
Akazara murefu 29 padiki.
Kureba Kwese 40 padiki.
Chiremera Chechigadzirwa 55 lbs. (41 lbs furemu uremu)
Kutumira Kukura 39 ″ L x 25 ″ H x 23 W
XO-55 - Manual Propel / Chinyorwa Mira hwiricheya UPC #
* yamiswa * XO-55 617237606167